Isikhokelo kwiiChianti Wines - Iindidi E Wayini
Isikhokelo kwiiChianti Wines
Kwakuqhele ukuba amava amaninzi aseMelika ngeChianti (kee-ahn-tee) iwayini yayiyibhotile ejikelezwe ngebhasikidi yomthi (ebizwa ngokuba yi fiasco ) kwaye ityiwe kwivenkile yokutyela yase-Itali, kodwa umhlaba wase Chinati mkhulu kakhulu kwaye unzima kunoko. I-Chianti ligama lewayini, kodwa ikwaligama lommandla waseTuscany,ElamaTaliyaneapho iidiliya zilinywa khona iwayini ziveliswa, kwaye abenzi bewayini beChianti banamhlanje bavelisa iwayini ekumgangatho wehlabathi.
Ummandla weWayini weChianti
Ukuze iwayini ibizwa ngokuba yiChianti, iwayini kufuneka yenziwe ngeepesenti ezingama-80 zeediliya zeSangiovese kwaye iveliswe kwiUmmandla weChianti. IChianti njengommandla uphakathi kweTuscany. Ibaleka kuyo yonke indawo yokuma kweTuscan, ukuqala eFlorence kumda osemantla nokusasazeka emazantsi kwidolophu yamaxesha aphakathi iSiena. Cinga ngalo mmandla njengepayi yeChianti esikwe yaya kwimimandla esibhozo yeChianti nakwi-DOCG (iDenominazione di Origine Controllata e Garantita) Iklasikhi Yeyona idumileyo kunye nemodeli yewayini eponymous. Oko kuthethwayo, i-Chianti iyonke iveliswa kwezinye iindawo ezisixhenxe zeChianti Rufina, Colli Fiorentini, Colli Aretini, Colli Senesi, Colline Pisante, Chianti Montespertoli, kunye neChianti Montalbano. Iwayini evela kule mimandla ingeyiyo iClassico inokubhalwa nje ngokuba Chianti okanye ngegama labo elingaphantsi.
Izimvo eziyi-8 zeBhasikithi zeSipho sewayini
Igalari ye-14 eluncedo ngokuNika iZipho zeWayini
Imigaqo kaRhulumente ilawula indlela ebhalwe ngayo iChianti. I-Chianti yi-Denominazione di Origine Controllata e-Garantita (i-DOCG) ebizwa ngokuba yi-Italiya, elona gama liphezulu kwimimandla yewayini e-Itali. Zonke i-Chianti yi-DOCG, kodwa uya kufumana olunye ulwazi kwileyibhile ukubonisa umgangatho kunye nendawo.
Iiwayini ezibhalwe i-Chianti DOCG zinokufunyanwa nakweyiphi na imimandla ese-Chianti. Ezi zihlala zikhaphukhaphu i-Chiantis ngaphandle kwethoni yokuguga, kodwa zenza intshayelelo elungileyo kwiwayini okanye zisebenze njengewayini entle nethengekayo.
ukulahleka kwebhabhathane lombongo womntwana
IChianti Classico DOCG
Iewayini ezinoku kule kwilebula zihlala zingumgangatho ophakamileyo. Iidiliya zivela kwingingqi yeChianti Classico, kwaye iwayini zihlala zigcwele kwaye zityebile ngokuguga kancinci kune-Chianti DOCG.
indlela yokwenza amakhethini aphezulu empompo
IChianti Classico Reserve
Njenge-Chianti Classico DOCG, iidiliya zale wayini ziyakhula kwingingqi yaseChianti Classico, kodwa ezi wayini zineminyaka emibhobho iminyaka emibini zidibene neenyanga ezintathu ezongezelelweyo ebhotileni. Ezi zewayini ezisemgangathweni ophezulu ezinetannins ezithambileyo kunye neencasa ezivela emthini zinikezelwe kwewayini.
Ukhetho olukhulu lweChianti Classico
Le ilebhile igcinelwe iwayini eziphezulu zeChianti Classico. Zenziwe ngokukodwa ngeiziqhamo zelifa, kwaye iwayini indala iinyanga ezingama-30 kwimigqomo ye-oki. Ngamanye amaxesha, iwayini sisidiliya esinye, ngokunjalo. Ezi zezona zibiza kakhulu kwaye zisemgangathweni kuzo zonke iwayini zeChianti.
Idiliya yokuqala kwiChianti yiSangiovese, kwaidiliya efanayo oyakufumana kuyoBrunelloiwayini. Ngowona mdiliya utyalwa kakhulu e-Italiya kwaye ngowona mdiliya utyiwa kakhulu kwihlabathi liphela. I-Chianti ngokubanzi yenziwe nge-80 ukuya kwi-100 leepesenti i-Sangiovese, nangona ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 zewayini inokuba zezinye iidiliya ezibandakanya iCanaiolo, iCabernet Sauvignon, iMerlot, okanye iSyrah, ezinokuthomalalisa umzimba ophakathi kunye neetannins ezinkulu ezifumaneka eSangiovese.
IProfayili yeCvanti Flavour kunye nokuBambisana kokutya
Umdiliya we Sangiovese uvelisa ukukhanya kwi wayini ezibomvu zomzimba eziphakathi nezomileyo ezine tannins eziphezulu kunye ne asidi. Indawo efanelekileyosebenza ubushushuI-Chianti kunye nezinye izinto ezibomvu ezikhanyayo zinokubanda kancinci; malunga nama-55 ukuya kuma-60 degrees Fahrenheit. Iincasa zibandakanya istrawberry, iziqhamo ezimnyama, amakhiwane, icuba, kunye nemifuno. Iziphumo zewayini zingumhlaba, zirustic, zineasidi, kwaye zineziqhamo ezilula kuphela, ke yiwayini edityaniswa kakuhle nokutya okuninzi, kubandakanya ukutya okuninzi okunje nge-lasagna, spaghetti, bruschetta, okanye ipitsa (cinga inyama kunye neetumato, igalikhi, kunye ne-oregano).
Olunye udidi lweHlabathi lweChiantis ukuzama
Eyona ndlela yokuqonda iChianti kukusela iChianti. Iivintana zamva nje ezivelisa imizekelo emihle yewayini zibandakanya u-2010, 2011, no-2013. Nangona kunjalo, eyona vintage ibalaseleyo kwimbali yakutshanje yeChianti yayingo-2015 nango-2016. Yomibini yayiyiminyaka eshushu eyadala iwayini ezinkulu ezinesakhiwo esinamandla kunye namandla amakhulu okuguga. Xa ufumana iwayini kwezi vintages, ungazigqithisi.
URocca delle Macie 'Riserva di Fizzano', iChianti Classico Grand Selection DOCG
Le wayini idume kakhulu ikumgangatho ophezulu;Umbonisi wewayiniuhlala eyinika amanqaku angaphezu kwama-90. Ngapha koko, isivuno se2016 safumana amanqaku atshisayo ngamanqaku angama-94. Kuxhomekeka ekuvunweni kweediliya, ihlala ixabisa malunga ne-40 yeedola kwibhotile nganye, kwaye iyafumaneka kubathengisi abanjengo Vivino .
Ukujikeleza komthi wekrisimesi kumile kwimithi eyenziweyo
UQuerciabella Chianti Classico Riserva
Iquerciabella's Chianti Classico Riserva li-100 leepesenti iSangiovese. Ikwayile wayini ye vegan; akukho mveliso yezilwanyana isetyenziswayo kwimveliso yayo. Yiwayini eyenziwe yaguga; isivuno se-2015 (esifumene amanqaku angama-94 ukusuka Umbonisi wewayini ) bayakulungela ukusela malunga no-2024 ukuya ku-2036. Yibhotile encinci, ke kunokuba nzima ukuyifumana e-United States, kodwa ukuba ungayifumana iimarike ezizisekondari , iya kukuxabisa malunga ne- $ 60. IQuerciabella Chianti Classico nayo yamkelwe kakuhle kwaye ayabizi kakhulu malunga ne- $ 30. Isigqibo Ndayithanda kakhulu iivini ka-2015, ndiyinika amanqaku angama-97 ngelixa Umbonisi wewayini wawongwa amanqaku angaphezulu kwama-92. Ungayifumana apha Iwayini.com .
Isivuno se-2016 sale wayini sibonise kakuhle, sifumana amanqaku angama-92 ukusuka Umdlamli wewayini kunye namanqaku angama-91 ukusuka Umbonisi wewayini . Yinyani ngexabiso lewayini elungileyo; ungayithenga le Chianti ngexabiso elingaphantsi kweedola ezingama-20 kubathengisi abanjengo Iwayini.com .
UBadia nguColtibuono Chianti Classico
Le yenye yeChianti Classico eqinileyo eqinisekileyo. Ixabisa ngaphantsi kwe- $ 25 kwibhotile nganye, kwaye i-vintage ka-2016 yafumana amanqaku angama-93 kuyo Umbonisi wewayini kwaye amanqaku angama-90 avela kuRobert Parker. Yindibaniselwano yeepesenti ezingama-90 iSangiovese ene-10 yepesenti yeCanaiolo. Yifumane Iintengiso zewayini .
Villa Antinori Chianti Classico Villa Antinori Riserva
Le yibhotile elungileyo yeChianti Classico Riserva ngexabiso elikhulu. I-Villa Antinori yaziwa ngokwenza i-Chiantis enamandla, kwaye i-vintage ka-2015 ifumana amanqaku angama-94 kwiWin Spectator malunga ne- $ 30. Yifumane Intambo yeWayini .
ISan Giusto iRentennano Chianti Classico
Jonga isivuno se2016 soku okumnandi Chianti Classico . Yinto yamandla okulinganisa, ukufumanaUkulinganiswa kwamanqaku angama-92ukusuka kokuthandwa nguJames Suckling (amanqaku angama-94), Ummeli wewayini (Amanqaku angama-92), kunye Umbonisi wewayini (Amanqaku angama-95). Ayimbi ngebhotile yewayini engama-30.
uyisusa njani imikrwelo kwiglasi
IBibbiano Estate Vigna del Capannino Grand Selection
I-Tenuta di Bibbiano yenza i-Chianti elungileyo ngexabiso elifikelelekayo. Le yeyona nto iphambili yabo emgceni, kwaye ixabisa malunga ne-40 yeedola kwibhotile nganye. Isivuno se-2016 safumana amanqaku angama-96 ukusuka Umbonisi wewayini , inqanaba elikhulu. Isiselo somdiliya.com inokukunceda ufumane iibhotile ezikhoyo; kufanelekile ukukhangela.
IiVini ezinamandla ezivela kwiTuscany
I-Chianti yiwayini enamandla, eselwayo e-Tuscany, e-Itali. Ngeencasa zayo ezinesibindi, yiwayini efanelekileyo yokubhanqa i-pizza okanye ubusuku be-spaghetti, kwaye ihlala iwayini emnandi uku-odola kwindawo yokutyela yase-Italiya nangona inqabile ukuba ifike kwibhaskiti ye-fiasco straw.
Amagama Abantwana Ulusu Care Kanye Nonyango Ukuhlala In San Francisco Ukuzilolonga Iividiyo Kunye Nomculo San Francisco Iindawo Zokutyela
yintoni endaweni yexanthan gum
yintoni ukutyeba kakhulu kuneminyaka eli-14 ubudala
ungathini xa umntu esithi ndiyakuthanda ngaphezu kombhalo
Yimalini imali yekhafu yokusela
inkulu kangakanani ipaki yesango legolide
imibongo yokufunda kwabafundi bezikolo eziphakamileyo